IRCTC Train Booking အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（17.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် IRCTC Train Booking - ConfirmTkt (Confirm Ticket)
အတည်ပြုပြီး ISCTC လက်မှတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏တူညီသောရထားအခြားလေ့ကျင့်မှုနှင့်ခန့်မှန်းခြင်းအင်္ဂါရပ်များဖြင့်အတည်ပြုပါ။ IRCTC ရထားလက်မှတ်များကိုအတည်ပြုရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ပါ။
ဤ IRTC အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အတူအခြားအလုံးအရင်းအပ features ားဖြင့်စာအုပ်လက်မှတ်များ, PNR အခြေအနေနှင့်အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာအသိပေးချက်, PNR အဆင့်အတန်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းအကြောင်းကြားစာ, ပြီးသား confirmkt ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်စောင့်ဆိုင်း? အတည်ပြုရန်လက်မှတ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်. ရယူပါ။
0 ီအားဖြင့်လေ့ကျင့်ရေးလက်မှတ်များကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုအထောက်အကူပြုရန် IRTCTC နှင့်တရားဝင်ပူးပေါင်းပါ0င်သည်။
●မည်သည့် IRCTC ရထားစုံစမ်းရေးကော်မရှင်များနှင့်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော 24x7 ဖောက်သည်အထောက်အပံ့များကိုခေါ်ယူခြင်း 08068243910 သို့ခေါ်ဆိုပါ။ ● IRCTC ရထားလက်မှတ်များကိုအတည်ပြုရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများတိုးပွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်လေ့ကျင့်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာများပါ0င်သည့်အင်္ဂါရပ်များ။
●ရထားနှင့်ရထား, ဘတ်စ်ကားနှင့်ရထားကိုသင့်အားသွားရန်အတည်ပြုလက်မှတ်ကိုပေါင်းစပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ multimodal alternate feature ကိုသုံးပါ။ ● IRCTC ရထားအတွက်ထိုင်ခုံရရှိမှုကိုနေ့စွဲနှင့်တည်နေရာကိုအလွယ်တကူခြေရာခံရန်အလွယ်တကူခြေရာခံ စာအုပ်များ / ဖျက်သိမ်းခြင်းအားလုံးအတွက် SMS အသိပေးချက်များ💬
● မေ့လျော့သော IRCTCC ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းသို့မဟုတ် IRCTC UserID အသစ်ကိုအလွယ်တကူမှတ်ပုံတင်ပါ။ အက်ပ်ထဲမှာ irctc စကားဝှက်ကို reset ။
●အထွေထွေခွဲတမ်းများ, အမျိုးသမီး, teskal, အောက်ပိုင်း Berth / sr ကိုထောက်ပံ့သည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးဌာန
●လက်ရှိကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ရထားလက်မှတ်များ Booking ● BHIM / UPI, အသားတင်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်များနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်များနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်များနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်များကဲ့သို့ထောက်ပံ့သောငွေပေးချေမှုပုံစံများကိုထောက်ခံသည် / br>
သင်၏ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမပြုမီ0ိုင်အားကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် PNR အဆင့်အတန်းအတည်ပြုချက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။
●အော့ဖ်လိုင်း mode တွင်ကြည့်ရှုရန်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းသည်။ ⌛
●ရထားနောက်ကျခြင်း, လက်ရှိတည်နေရာ, မျှော်လင့်ထားချိန်ကိုသင်စိုးရိမ်ဖူးခြင်းသို့မဟုတ် 'ငါ့ရထားဘယ်မှာ' ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးခဲ့တယ်။ Communtertkt ၏ Live GPS ခြေရာခံခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသော app ဖြစ်သည်။
●ရထားနည်းပြရာထူးမှချက်ချင်းမွမ်းမံမှုများရယူပါ။ ရထားလမ်းနှင့်အွန်လိုင်း - လက်ရှိတည်ရှိရာရထား Procession 🕐
br> 📲 လွယ်ကူသော UI & Indept အကြောင်းကြားစာများအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ပါ0င်သည်။
●သုံးစွဲရန်လွယ်ကူသည်။ ● smart နှင့်အလိုလိုသိမှုကိုလွယ်ကူစေသည် လွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်မန်နေဂျာ။
●သင်၏ SMS မှအလိုအလျောက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ရယူပါ။ သင်၏ PNR ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။ သင်၏ PNR ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။
●အတည်ပြုချက်သည် 2017 ခုနှစ်တွင်ခရီးသွားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆုအတွက် MANTHAN ဆုအတွက် MANTHAN ဆုရရှိရေးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဆုဆုများဖြစ်သည်။ 2016.
IRTCTC အတွက်အဓိက0န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ IRTCTC သည် IRTCTC RARK Connet နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Ravel Family:2ကုစီဗိုင်းရပ်စ်ခရီးသွားများနှင့်ရေတွက်! မင်္ဂလာဟောကိန်းထုတ်! br>
📧 ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့အား [email protected] တွင်မေးမြန်းချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုမေးပါ
ဘာအသစ်လဲ IRCTC Train Booking - ConfirmTkt (Confirm Ticket) 7.4.7